Wararka - Kuul Dahabi ah oo Luul Dahab Dahab ah iyo Kuul Kooban Dahab Dahab
Kuullo Dahab Pearl Peads iyo Kuul Koofiyad Dahab Gul
Luulka dahabiga ah ee inta badan aan ka hadalno waxaa loola jeedaa Luulyada Badda Koonfureed, oo ah nooc ka mid ah luulka badda ee ku dhasha badaha waqooyiga Australia, Filibiin, Malaysia iyo jasiiradaha Indooniisiya. Sababtoo ah midabkeeda dahabiga ah, waxaa loo yaqaan 'South Sea Gold Pearl', oo sidoo kale loo yaqaan 'Pearl Sea Pearl'. Macno malahan qiimo ahaan ama qiimo ahaanba, waxaa loogu yeeri karaa boqorka luul. Luulyada Badda Koofureed oo tayo sare leh ayaa xitaa naadir ah.
Guud ahaan waxay leedahay dhexroor 9-16mm Badda Cas ee Koonfurta, badankooduna waxay u dhexeeyaan jaalle iyo caddaan, qaddar yar oo qaali ah oo dahab qaali ah leh.
Sidaa darteed, qiimaha kuullada dahabka waa mid aad u sarreeya. Cayrsiga suuqa ayaa ka dhigaya soo saarayaal badan inay doortaan inay dheecaan luul. Haddaba, sidee baan u kala soocnaa luulka midabkiisu yahay iyo luul dahabka dabiiciga ah?
Midabka kuullada midabkeedu jilicsan yahay, laakiin midabka luul dabiici ah ma aha midab adag, waxaa jira badiyaa midabbo la socda. Luulka si tartiib ah u rog, oo waxaad arki kartaa iftiinka yar ee u eg qaansoroobaad si joogto ah isu beddelaya. Midabka luullada midabka leh ayaa aad u kali noqon doona, iyadoo aan loo eegin xagasha ay iskaga egyihiin, sidaa darteed way iska cadahay inay ka duwan yihiin luul dabiici ah.
Luul la midabeeyey, midabku wuxuu degi doonaa meel leh cufnaan xoogaa yar, ka dibna bar baa la samayn doonaa, hase yeeshe, luullada dabiiciga ahi waxay leeyihiin midab isku mid ah oo isku mid ah mana jiraan ifafaale noocaas ah.
Haddii aad la kulanto Luulyada Badda Koofureed ee ku jira midabka dahabka ee hodanka ah qaab ahaanna wanaagsan, laakiin qiimaha aad ayuu u jaban yahay, fiiro gaar ah u yeelo. Sababtoo ah saamiga luulka Koonfurta Badda oo leh midab wanaagsan, qaab wanaagsan iyo cillad la’aan ayaa aad u yar, qiimaha aad buu qaali u noqon doonaa.
Haddii iibiyuhu sheegto inay hayaan 11-13mm luul oo dahab ah oo aan iin lahayn, oo qiimuhu ka jaban yahay wixii aad taqaanay, ka fogow.
Haddii baaxadda luulka badda koonfureed ka yar yahay 8mm dhexroor, waxaad u baahan tahay inaad feejignaan sare muujiso.
Dhexroorka Dahabka Dahabka guud ahaan waa 9-16mm, taas oo ah dareen caadi ah.
Haddii aadan hubin in luulka aad soo iibsatay uu midab doorsoon yahay, fadlan u gee hay'ad baaris awood u leh baaritaanka.
Waqtiga boostada: Jul-03-2021
Hadiyadaha Gabdhaha Freshwater Pearl, Dhalasho Dhab Ah Dhaqan Biyo Macaan, Hilqado Pearl Pear, White Gray Freshwater Pearl, Aaa Biyo Macaan, Hilqado Aroos,